Waa maxay parthenogenesis? - AFRIKHEPRI FOUNDATION
Magacyadii hore ee Masiixa ee Hieroglyph ilaa Faransiiska
Galbeedka illaa dib-u-heshiisiinta Afrika
Geedaha ayaa u kalaeeya cuntada dhexdooda xidid ahaan
Abaalmarinta Cusboonaysiinta Abaaraha Tansaaniya oo leh Nidaamka Hawo Bixinta Biyaha
Chabin, mulatto: Tayada leh macnaha pejorative iyo zoologiyada
Waa maxay parthenogenesis?
La parthenogenesis (ka Greek parthenos, bikrad ah, iyo Bilowgii, dhalashada) waa kala qaybinta a gamete haweenka aan xaqirsanayn. Waa qaab hal-waalid ah oo dhalid ah. Waxay ku xiran tahay qaababka dhalmada galmada sababtoo ah waxay u baahan tahay faragelinta gamete laakiin marka maqnaanshaha wax lagu qeybiyo sheyga hiddaha ee qof kale natiijada waxay la mid tahay dhalashada asexuusha.
Xaaladahan waxaa si dabiici ah lagu arkay noocyada dhirta iyo xayawaanka qaarkood, laakiin sidoo kale waa loo calaamadeyn karaa. Boqortooyada geedka, parthenogenesis waa wax aan caadi ahayn angiosperms. Parthenogenesis waxaa laga helaa dad badan taxa sida nematodes, ka polychaete, ka oligochaete, ka nemerteans, ka cayayaanka (oo ay ku jiraan cayayaanka sidashinni iyo malabiso), The gastrotrichs iyo qaar xamaarato.
"Waa in aan aqoonsanno gabdhaha suurtogalnimada ah ee parthenogenesis" wuxuu sharxayaa Dr. E. Roge.
Qarsoonaanta dhalashada bini'aadamka
By Dr. Bernard
Cilmi-baadhis cilmi-baadhis ah oo ku saabsan jiritaanka hab-sifeyn sare oo ku saabsan bacrimin-abuurka bani'aadamka bani'aadamnimada, taas oo ah jinsiyad wayn oo la abuuri karo - hab ka duwan habka xayawaanka oo sidoo kale ka sarreeya, kaas oo hooyooyinka bikradaha ah ee sagaal gudaha England ayaa awooday in ay soo saarto carruurta dhowr sano ka hor, sida lagu xaqiijiyay su'aalaha ay sameeyeen koox dhakhaatiir Ingiriis ah, oo ay u aqoonsadeen Ururka Caafimaadka ee Ingiriiska sida xaaladaha dhabta ah ee bani'aadamka bani'aadamka ama dhalashada by bikradaha iyo sidoo kale ayuu yidhi qoraaga. Waxa uu ku dhawaaqayaa in haweenkani ay awoodaan in ay sameeyaan - haweeney kasta way sameyn kartaa.
Mice iyo ragga
Sayniska Futura. Khibrada waxay ka timaadaa April 2004 ee Japan.
Habdhaqanka cusub ee bayoolojiga ayaa wiiqay tijaabada Japan. Cilmi-yaqaannada Asiya oo ka shaqeynaya parthenogenesis - dhalmo aan lahayn bacriminta, sidaas oo aan lahayn rag, noocyada jinsiga ah - waxay awoodeen in ay dhalaan ilmo uur leh oo uur leh laba hooyo hidde ah, laakiin aan lahayn aabbo. Marka ugu horeysa ee naasku ku jiro. Dhammaantood waxay ka digayaan in qaabka loo isticmaalo, taas oo aad uga duwan ka soo jiidashada, aan loo adeegsan karin aadanaha, sababaha farsamada iyo anshaxa labadaba. Mid ka mid ah xubnaha taranka ee tijaabada ayaa runtii ah mashiinka DNA-da la bedelay, si uu uga dhigo in uu u shaqeeyo sidii ragga uurka ku jira. Diyariga mammalian ah, hiddo-wadaha qaarkood, aad u yar, ayaa si kala duwan loo muujiyey iyada oo ku xiran hadday gudbiyaan aabbaha ama hooyada. Prof. Axel Kahn oo ah Agaasimaha Machadka Cochin ee Paris ayaa u sheegay Associated Press Khamiistii. Qaar ka mid ah hiddo-yadaas ayaa la kiciyaa oo keliya haddii ay hooyada ka yimaadaan oo ay aamusnaato marka ay ka yimaadaan aabaha, iyo sida kale. Si loo fuliyo shaqadooda, cilmi baarayaashu waxay dib u habeyn ku sameeyeen dhaxalka hidaha ee jinsiga dumarka iyagoo soo jiidanaya "faafinta waalidnimo", oo u oggolaanaya mid ka mid ah unugyada guud ee aamusnaanta inay muujiyaan. Waa transgenesis kan u oggolaanaya in dhedigga haweenku ay u dhaqmaan sida faraha lab ah. Wixii Kent Vrana, oo cilmi baare ka ah Jaamacadda Pennsylvania, haddii cirbadda caafimaad leh loo abuuri karo iyada oo aan lahayn DNA aabaheed, waxaa la filan karaa unugyada asaasiga ah.
Waxyaabaha ka soo baxa : Jinsiga Hore - Elizabeth Gould Davis - 1971
Guska, abuur cusub
Hooyooyinka taranka ee haweenku aad ayay uga weyn yihiin kuwa naaska iyo wax badan oo ka soo baxay. Xataa xayawaanka hoose ee hooseeya, ugxan-yari, ilmo-galeenka, shahwada, iwm, waxay la mid yihiin kuwa haweenka ah, oo muujinaya in habka taranku uu ahaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee dabiiciga ah.
Dhanka kale, xubnaha taranka ee labka ah, xiniinyaha iyo guska, waxay ku kala duwan yihiin noocyada iyo inta lagu guda jiro horumarinta, iyo sidoo kale qaabka cagaha - laga bilaabo cowska ilaa caws. Sidaa daraadeed, guska ayaa si muuqata u muuqda inuu ku habboon yahay siilka, ma aha siilka si uu uhesho guska. Guska ayaa ka soo kabtay mudaharaadkii; Tani waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in ragga laftoodu ay ka dhalanayaan isbeddel goor hore oo ah haween asalka ah. Ninku waa gabadh aan caadi ahayn.
Ninku waa haween aan caadi aheyn
Jeermisyada iyo dhakhtarka dhimirka ayaa noo sheegaya in Y-shomosom yada soo saarta ragga ay tahay X kromosome -ka dumarka koromosoomka ah - jebiyey oo googooyey. Dumarka oo dhan waxay leeyihiin laba X-chromosomes, halka ninka uu leeyahay Hormo Xaaskiisa hooyo iyo Y chromosome aabihiis. Waxay u muuqataa mid macquul ah in buqoshadan yaryar ee Y chromosome waa qalad hidda - shil dabiiciga ah - iyo asal ahaan waxaa jiray hal jinsi keliya - jinsiga dumarka.
A wakiil physicochemical fudud
Dareeminta haweenka aan lahayn fal galmo, parthenogenesis, ma aha oo keliya suurtogalnimada, laakiin waxaa laga helaa halkan iyo halka adduunka casriga ah, oo laga yaabo in ay yihiin qaar ka mid ah hababka qadiimiga ah ee dhalmada ee dunidii dhammaystiran. Tan iyo markii la helay helitaanka caddaynta jinsi-dheneed ee Jacques Loeb ee 1911, "Waan ognahay in ninku aanu lagama maarmaan u ahayn dhalashada, iyo in haweeney jireed oo siman oo haween ah ay ku jirto haweeney ay ku filan tahay inay kiciso"[Raymond de Becker]
Isis, goddess of parthenogenesis
Isiis, oo ilaahyadii Masriyiintii qalloociyeyna, waxay hooyadiis ka dhergeen; iyadu sidoo kale waa ilaah waalid ah; macbudyadiisa ku yaalla Sais, magaalada quduuska ah, waxay ku dheehan tahay buuggan: Qofna weligiis ma dhicin khamiiskeyga, miro aan ku dhashay waa Sun. Ninkii kibirsan ee sharaf leh afkiisuu wax ku dhuftaa; waxa uu ku dhawaaqayaa inuu ka madax-bannaan yahay nin, uma baahna in uu kufaraxo iskaashigeeda si loo soo saaro. Giriiggu wuxuu ka jawaabi doonaa caddaynta aaminka ah. Jupiter, aabaha ilaahyada, waxay soo saari doonaan Minerva iyada oo aan caawino naagta, iyo Minerva, goddess "Qofkii aan uuraysan ee gudcurka uurka hooyadiis"wuxuu noqon doonaa cadowga haweenka ee haweeneyda ugu sarreeya.
Waxaad ku jawaabtay "Waa maxay parthenogenesis?" Dhowr daqiiqo ka hor
Natiijooyinka codadka 0 / 5. Tirada codadka 0